खोपका लागि राष्ट्रपतिले पहल गर्दा विरोध गर्ने भीम रावललाई योगेश भट्टराईको काउन्टरNepalpana - Nepal's Digital Online
खोपका लागि राष्ट्रपतिले पहल गर्दा विरोध गर्ने भीम रावललाई योगेश भट्टराईको काउन्टर
नेपाल पाना जेठ १८ २०७८
काठमाडौं । कोभिड महामारीले आक्रान्त नेपालमा खोपको अभाव छ । दातृ निकायले खोप दिन ढिलाई गरेका छन् ।
यस्तोमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पहलले खोप आउने वातावरण सिर्जना भएको छ । राष्ट्रपतिको पहल पछि चीनले १० लाख डोज खोप दिने घोषणा गरेको छ । खोप लिन आज नेपाली जहाज चीन जाँदैछ ।
भारतले पनि छिट्टै खोप पठाउने तयारी गरेको छ । रुससँग पनि खोपका लागि पत्र पठाइएको छ ।
राजनीतिक दलहरु राजनीतिक खिचातानीमा अल्झिरहँदा राष्ट्रपतिको नागरिक खोगाउन अत्यावश्यक खोपका लागि आफ्नो कुटनीतिक प्रयास गरेकोमा स्वागत र प्रशंसा भइरहेको छ ।
नागरिकको ज्यान जोगाउन राष्ट्रपतिले आफै पहलकदमी लिइरहेकी छन् । यस्तोमा राजनीति खिचातानीमा सबैभन्दा बढी अल्झिएका कोभिड १९ संक्रमण नियन्त्रणका लागि सिन्को नचाँचेका पूर्वमन्त्री भीम रावलले राष्ट्रपतिमाथि नै औला ठड्याए ।
राष्ट्रपतिले खोप कुटनीति प्रयोग गर्नु संविधान विपरीत भएको तर्क गरे । संविधानको उल्लंघन भएको बताए । खोपका लागि पहल राष्ट्रपतिले गर्ने हो कि सरकारले भन्ने प्रश्न उठाए ।
कोरोनाबाट त्रसित नागरिकको मनोदशाको शोषण गर्ने? भनेर पनि प्रश्न उठाए । तर यो प्रश्न रावलकै लागि ब्याक फायर भयो ।
यसअघि वीरगंजमा भारतीयको नागरिकता लिन लाइन लागेको भनेर चिप्लिएका रावल यसपालि विरोधका लागि विरोध गर्दा आलोचित बन्न पुगे । उनको जनस्तरबाट महामारीमा संविधान र देशको कानुन नै मिचेर नागरिकको जीवन रक्षामा लागे जायज हुने, त्यस्ता नियम कानुन मिचेरै भए पनि खोप ल्याउन गरेको पहल सह्रानीय भएको भन्दै विरोधका लागि विरोध नगर्न भनेर आलोचना भयो ।
यसमा अब नेकपा एमालेका युवा नेता योगेश भट्टराई पनि थपिएका छन् । भट्टराईले राष्ट्रपतिको पहललाई अन्यथा लिन नहुने जवाफ दिएका छन् । रावल र भट्टराई दुबै माधव नेपाल समूहमा छन् । रावल कारवाहीमा परिसकेका छन् भने भट्टराई पार्टी जोगाउने अभियानमा छन् । यस्तो राष्ट्रपतिको विषयमा दुई नेताको अलग धारणा आएको छ ।
भट्टराईले भनेका छन्, 'राजनीतिक बिषयमा राष्ट्रपतिको अधिकार र सक्रियतालाई संबिधानले नै सीमाबद्ध गरिदिएको छ । सामाजिक सद्भभाव, राष्ट्रिय एकता र जनचासोका बिषयमा राष्ट्रपतीको अग्रसरताले सार्थक परिणाम आउंछ भने त्यसलाई अन्यथा मान्नु हुन्न । खोपका लागि राष्ट्रपतीको सक्रियतालाई यसरी नै बुझ्ने की ?'
'रअ' प्रमुखसँग राती सुटुक्क भेटेका ओलीलाई भीम रावलको काउन्टर अट्याक, बन्द गर्न चेतावनी !
ओलीले संसद विघट गर्नुपछाडि भयंकर ठूलो लोभ, भीम रावलले गरे खुलासा !
नेकपामा आर्थिक द्धन्द्ध, खाताबाट ३० लाख निकालेको आरोपमा भीम रावल !
ओलीको साइबर सेनाले गर्याे भीम रावल माथि आक्रमण, अछाम पुगेर बाेल्न सके !
जेठ १८, २०७८ मंगलवार ०९:०४:३२ बजे : प्रकाशित